गाई काटेर खाँदा हिन्दुलाई आपत्ति किन ? – Gulminews
Home/बिचार/गाई काटेर खाँदा हिन्दुलाई आपत्ति किन ?
गाई काटेर खाँदा हिन्दुलाई आपत्ति किन ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ श्रावण ८, आईतवार १९:२७ मा प्रकाशित
आजभोलि मात्र होइन, गाई काट्न प्रतिबन्धको प्रारम्भ मसिना राज्यहरू गोरखा राज्यमा गाभिए पछिदेखि नै हो । खास गरी चाहिँ गिवार्णयुद्ध बित्रम शाहको पालामा गोवद्ध नगर्न कडा आदेश भएको थियो । तर यस्तो आदेश जारी गरे पनि गोवद्ध भने रोकिएको अहिले सम्म थाहा छैन ।
नेपालमा गोहत्या निषेध गरे पछि गोहत्या गर्ने र गोमासांहार गर्नेलाई “पातकी’ “नरपिसाच” भनियो र कानुनी व्यवस्थाद्वारा कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । र, गोवद्ध गरेका नागरिकलाई १२ वर्षको जेल सजाय त अहिले सम्म पनि जारी नै छ । तामाङ र सार्कीहरुलाई मरेको गाई गोरुको मासु खान अलि–अलि छुट थियो । त्यस बापत बाहुन क्षेत्रीले सिनो खाने भोटेहरु भनेर तामाङलाई घृणा गर्ने गर्थे, भने सार्कीहरु सिनो खाने गिद्ध, गन्धे भनेर घृणा अपमानको सिकार भएकै हो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ र लडेर मरेको गाईको मासु समेत खानेलाई सजाय दिन थालिएको छ ।
यस्तो अवस्था आइ पुग्यो कि मान्छे मार्दा सजिलो छ गाई काट्दा गोलीले चिसिनु पर्ने भयो । त्यस्तै भएको थियो गोरखाका लाक्पा तामाङलाई । आजभन्दा ३ वर्ष अघि गाई काटेर खाएको भन्दै गोली ठोकेर लाक्पा तामा्ङलाई मा¥यो । तामाङलाई मार्नेले राज्यबाट माफ पायो । मान्छे मार्ने उद्योगमा लागेकाहरु यसरी नै निर्धक्क साथ हिडि रहेका छन् । तर गाई गोरुको मासु खाने अहिले पनि जेलमा कच्रिनु परेको छ । यो कस्तो कानुन हो ? यो कस्तो संस्कार हो ? यो कस्तो राज्य हो ?